भट्टराई र बैद्यको प्रतिवेदन प्रस्तुत,दाहालको पालो आज | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← कुन क्षेत्रमा कति बजेट ?
गोरखाको पालुङटारमा जारी छैठौं विस्तारित बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन’bout प्रकाश पार्दै वैद्यले त्रुटि सच्याएर अघि बढ्न अध्यक्ष दाहाललाई सुझाव दिएको सञ्चारकर्मीहरुलाई बताए । वैद्य अघि अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आफ्नो प्रतिवेदन’bout विस्तारित बैठकमा प्रकाश पारेका थिए । भट्टराई र वैद्यले प्रतिवेदन’bout प्रकाश पारिसकेपछि अध्यक्ष दाहालले मंगलबार विहान ८ बजे आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
भट्टराईले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दै विचार र राजनीतिमा स्पष्टता र संगठनात्मक रुपान्तरणसहितको एकतामा जोड दिएका छन् । संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जनमुखी संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उनले तत्काल जनविद्रोहमा गए प्रत्युत्पादक हुने तर्कसमेत प्रस्तुत गरे । जनविद्रोहको लागि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति अनुकुल नरहेको भट्टराईको दावी छ ।
तीनवटै प्रतिवेदनमा एकरुपता नभए महाधिवेशनमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गर्दै उनले पार्टीभित्र मजबुत एकताको विकल्प भने नरहेकोमा जोड दिए ।
आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि डा. भट्टराईले ‘पालुङ्टारको गोरुले सल्यानटारको बिऊ खायो, कान्छी ल्याउँदा जेठी जील खायो’ भन्ने पुरानो गीतलाई आफ्नै शैलीमा प्रस्तुत गर्दै –‘पालुङ्टारको बिचारले बालुवाटारको निद खायो, माओवादी एक हुँदा संसार नै जील खायो ।’ भन्ने गीत गाएर सबैलाई हसाए ।